आजः ८ बैशाख, २०७५ (शनिबार)
२१ अप्रिल, २०१८
नेपालीमा ३०,४९३ लेखहरू सङ्ग्रहित छन् ।
सुमन पोखरेल (जन्म सन् १९६७, सेप्टेम्बर २१) नेपाली कवि, गीतकार, नाटककार, अनुवादक तथा कलाकार हुन् । उनका रचनाहरू विभिन्न भाषामा अनुवादित भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित भएका छन् । सुमन पोखरेल एक महत्वपूर्ण दक्षिण एसियाली कविका रूपमा चिनिन्छन् । उनी सन् २०१३ तथा सन् २०१५ को सार्क साहित्य पुरस्कारद्वारा विभूषित भएका छन् । सो पुरस्कार दुई पटक प्राप्त गर्ने उनी एक मात्र कवि/लेखक हुन् । नेपालीका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी, मैथिली, हिन्दी, उर्दू तथा बङ्गाली भाषाहरूमा पकड भएका पोखरेलले बहुभाषामा कलम चलाएका छन् । उनका नेपालीमा दुईवटा कवितासङ्ग्रह तथा एउटा गीतसङ्ग्रह प्रकाशित छन् । उनका गीतहरू विभिन्न गायकका एल्बममा समावेश भएका छन् । पोखरेलका अनुवाद तथा केही निबन्ध विविध सङ्कलनहरूमा समाविष्ट रहेका तथा विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन् । पोखरेलद्वारा लिखित नाटक नेपालबाहिर प्रदर्शित भइसकेको छ । उनी चित्रकारमा रूपमा पनि सक्रिय रहेका छन् । (पूरा लेख...)
... डा. फुहररले लुम्बिनीको उत्खनन् गरेपछि सन् १ डिसेम्बर १८९६ मा भगवान गौतम बुद्धको (चित्रमा) जन्म लुम्बिनीमा भएको पत्ता लागेको थियो ।
... स्वीडेनकी किकी हाकानस्सन पहिलो विश्वसुन्दरी हुन् ।
... सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वको पहिलो महिला जापानकी जुन्को ताबेई हुन् भने नेपालको पहिलो महिला सगरमाथा आरोहि पासाङ ल्हामु शेर्पा हुन् ।
... विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मरूभूमि सहारा मरूभूमि हो ।
... नेपालमा १८५ प्रकारका माछा पाइन्छ ।
... सर्वप्रथम कफी इथियोपियामा पत्ता लागेको थियो ।
... एशिया महाद्वीपको जम्मा क्षेत्रफल चन्द्रमाको जम्मा क्षेत्रफल भन्दा धेरै छ ।
बेलायती भौतिकशास्त्री तथा ब्रह्माण्ड-बैज्ञानिक स्टिफन हकिङको ७६औ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
२०७४ फागुन २८ मा ढाकाबाट काठमाण्डौ आएको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुदा ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
खड्गप्रसाद ओली (चित्रमा) दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
अमेरिकाको ४५औँ राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले बर्ष २०१६का शक्तिशाली महिलाहरू मध्ये ५२औँ स्थानमा सूचिकृत गरेको छ ।
२०७२ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भएको छ ।
ताइवानकी पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा साइ इङ वेन निर्वाचित भएकी छन् ।
नेपाली विकिपिडिया विश्वका विकीहरूको सूचीमा ३०,४९३ लेखहरूका साथ ९७ औँ स्थानमा पुगेको छ ।
८ बैशाख (२१, अप्रिल) (जन्म):
एलिजाबेथ दोश्रो (सन् १९२६)
बि.स. २०१७ (सन् १९६०) - ब्राजिलको पुरानो राजधानी रियो दी जेनेरियोलाई सारेर आधिकारिक रूपमा ब्रसिलियालाई राजधानी घोषित गरिएको थियो ।
बादलले घेरिएको नर्वेको अस्त्नेसजोर्देन...
फोटोग्राफर/श्रोतः Ximonic , मितिः ३० मे २०१५
सम्बन्धित पृष्ठः नर्वे
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मुख्य_पृष्ठ&oldid=636133" बाट निकालिएको